Myanmar Defence Weapons: ASEAN Armies Rifle Meet
koko superdanger September 16, 2012 at 8:04 AM
Very nice MA-1 Assault Rifle. ဒေါက်ကပုံစံအသစ်လား တော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းသွားတယ်။ (M60 Bipod style)နဲ့ တူတယ်။
(MA-2 Light Machine Gun)က Dragunov Tiger ဒင် ပုံစံတတ်ထားတာ ထင်တယ်။ scope မျိုးစုံ တတ်ဆင်လို့ရအောင် tactical rail တွေပါ ဆင်ပေးလိုက် ပိုကောင်းသွားမယ်ထင်တယ်။ အဲဒါဆို detachable or folding iron sight တတ် လို့ ရသွားမယ်. scope တွေတတ်ရင်အဆင်ပြေအောင်လို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ အခုတိုင်းတောင်ကြည့်လို့ကောင်းနေပြီ။
ZOMBIES September 16, 2012 at 8:05 AM
MA - 1 & MA-2 စက်သေနတ်တွေက တော်တော်လေးမိုက်တယ်နော် မြန်မာတပ်မတော်စစ်သားတွေမှာ ဒီသေနတ်တွေတပ်ဆင်ထားပြီးလားခင်ဗျာ။မြန်မာတပ်မတော်စစ်သားအားလုံးကို ဒီသေနတ်တွေနဲ့ဒီယူနီဖောင်းတွေ ကို တပ်ဆင်ပေးလိုက်ရင် အရမ်းကောင်းမှာပဲ။
Sarpaling Nhin Maung September 16, 2012 at 9:41 AM
Myanmar Army Rifle Team should trainalot header than now to get some prizes. When I look at the previous years' competitions, the standing of myanmar army rifle team was very poor. If I am not wrong, Myanmar army rifle team didn't get any prizes at this year Indonesia competition. I don't want our army to be looked down by other countries. We should train like Indonesia and Thailand armies who always win most of the tropies. You can check the results here --> http://www.mindef.gov.sg/imindef/mindef_websites/topics/aarms09/match_results/actual.html
Try your best Myanmar Army Rifle Team.. We will always support you no matter what.
cnyein October 5, 2012 at 1:48 AM
အရပ်သားတွေကော လာကြည့်လို့ရမလား သိချင်ပါတယ်၊
Thar Gyi October 5, 2012 at 3:32 AM
ဒို့လည်းကြည့်ချင်တယ် လေ့လာချင်တယ် ရမလားမဥိဘူးသိတဲ့သူရှိယင်ပြောပေးကြပါအုံး
Ye Lynn Aung May 31, 2013 at 2:49 PM
ကျုပ် အမြင် အရ trophy ရမရထက် MA series များ အ နေနဲ့ လက်တွေ့ combat များမှာ reliable ဖြစ်ဖို့ အ ရေးကြီးပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် များနဲ့ ဖြစ်စေ အခြားတိုင်းတပါး ကျုးကျော် ရန်စမှု များကို တပ် မ တော်သား များလက်တွေ့ ရင် ဆိုင် တဲ့ နေရာ မှာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ ဖို့ ပို အ ရေးကြီးပါတယ်။